Mourinho oo markale dhaleeceeyay ciyaartoydiisa, kadib barbarihii ay la galeen kooxda Southampton - Wargane News
Home Sports Mourinho oo markale dhaleeceeyay ciyaartoydiisa, kadib barbarihii ay la galeen kooxda Southampton
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa dhaleeceeyay ciyaartoydiisa ka dib kulankii ay barbaraha 2-2 la galeen Southampton ee ka tirsanaa kulamada 14-aad ee horyaalka Premier League.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu daboolka ka qaaday wareysi uu bixiyay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho kadib kulankii Southampton
“Ciyaartoydu waxay u muuqdeen kuwo si fiican u dagaalamay, laakiin waxaa ka maqnaa xamaasada ay ku joojin lahaayeen kubada iyo cadaadiska kaga imaanayay kooxda kale”.
“Ma ahayn natiijada aan ka dooneenay kulankan, laakiin waxaan heysanaa waxyaabo badan ee aad u fiican”.
Si kastaba kooxda Southampton ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 13-aad ee qeybta hore, waxaana u dhaliyay laacibkooda Stuart Armstrong, halka Cedric Soare uu markale daqiiqadii 20-aad ka dhigay ciyaarta 2-0.
Laakiin Manchester United oo kulankan awooday inay hesho barbaro ayaa waxaa gool u dhaliyay Romelu Lukaku daqiiqadii 33-aad, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-1, kadib Ander Herrera ayaa isla qeybtii hore ciyaarta daqiiqadii 39-aad ee ciyaarta ka dhigay barbaro 2-2.